भ्यू टावर कि अस्पतालः आगोमा जलेकी कुलमाया उपचार नपाएर छट्पटाउँदै
कमल गाउँपालिका, झापामा अर्काको घर, गाईगोठ र खेतबारी हेरचाह गरेर देवीबहादुर बस्नेत परिवारको गुजारा चलिरहेको छ।
देवीबहादुरका दुई छोरी र एक छोरा छन्। उनको पुरानो थातथलो खोटाङ हो। खोटाङबाट २०३७ सालमा झापा आएका थिए।
अरूको खेतबारी जोतेर दुःखसुख जीवन धानिरहेको बस्नेत परिवारमा डेढ महिनाअघि बज्रपात पर्यो। देवीबहादुरकी जेठी छोरी कुलमाया आगोले जलिन्। मंसिर ९ गते गाईलाई खोले पकाउने क्रममा कुलमायाको शरीरमा आगो सल्किएको थियो।
आगोले शरीरको लगभग २० प्रतिशत भाग जलेको छ। कुलमाया २२ वर्ष पुगे पनि स्वाभावले केटाकेटी नै छन्। जन्मँदै सुस्त मनस्थिति स्वभावकी थिइन्। शरीरमा आगो सल्किएको पत्तै पाइनन्। बारीमा काम गरिरहेका देवीबहादुरले देखेपछि हत्तपत्त निभाए।
कपडासँगै टाउको मुनिको भाग निकै जलिसकेको थियो। तत्कालै धोई-पखाली गरेर अटोरिक्सामा दमक अस्पताल ल्याए। त्यहाँबाट दमककै लाइफलाइन अस्पताल पुर्‍याइयो। त्यहाँ उपचार सम्भव भएन।
कुलमायालाई दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीसहितका सामाजिक कार्यकर्ताको पहलमा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइयो। प्रतिष्ठानमा १२ दिन राखियो। तै जलेको घाउमा सुधार आएन।
आंशिक उपचारपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकले काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पताल लैजान सिफारिस गरे।
बस्नेत परिवारसँग थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने त के, घर फर्काउने एम्बुलेन्स भाडा पनि थिएन। यो देखेर प्रतिष्ठानका कुरुवा र बिरामी हेर्न जानेहरूले लखनपुरस्थित कुलमायाको घरसम्म फर्किने खर्च जुटाएर पठाइदिए।
गाउँको ‘सिंहदरबार’ भनिएको स्थानीय सरकारको वडा कार्यालयले छेवैमा बस्ने बस्नेत परिवारको अप्ठ्यारोमा साथ दिन सकेन। दुःख साट्न कोही सरकारी प्रतिनिधि पुगेनन्। छरछिमेक र आफन्तले तातो-चिसो र बेलाबेला बिरामीलाई खान दिने सामान्य दायित्व पूरा गरे। कुलमायाको बाँकी उपचार र दीर्घकालीन जीवनयापनको विषय ‘तपसिल’मै रह्यो।
कुलमायाको जलेको शरीर उपचार र पर्याप्त स्याहारसुसार, खानेकुरा नपाउँदा दिन-प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। उनका वरिपरि प्रायः कोही पुग्नै छाडेका छन्।
उनको यो दयनीय अवस्थामा राहत दिन स्थानीय युवाहरूको एक समूह गाउँपालिका निर्वाचनमा अध्यक्ष लडेका कांग्रेस नेता हुकुमसिंह राईकहाँ पुग्यो। राईले लत्ताकपडा र केही आर्थिक जोहो गरिदिए। युवाहरूले कुलमायालाई पैसा हैन, थप उपचार चाहिएको अवगत गराए।
राई तत्कालै बस्नेत परिवारलाई भेट्न गए। त्यही बेला दमकस्थित एड्भान्स अस्पतालका एक सञ्चालक माधव पराजुली त्यहीँ पुगेका रहेछन्।
पराजुली र राईले बस्नेत परिवार र स्थानीय केही युवासँग सरसल्लाह गरे। पुस २२ गते लखनपुरस्थित रेडक्रसको एम्बुलेन्समार्फत् कुलमायालाई दमकको एड्भान्स अस्पताल ल्याइयो। कुलमायाको अवस्था देखेर त्यहाँका मेडिकल डाइरेक्टर डा. सन्तोष सुवेदीले उपचारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिए।
साधारण उपचार गर्ने यो अस्पतालमा जलेका बिरामीका लागि खास प्रबन्ध छैन। साधनस्रोत अभाव छ। डा. सुवेदीका अनुसार कुलमायाको जलेको भाग निकाल्ने र घाउमा साधारण उपचार गराइराखिएको छ। अवस्था केही सुधारोन्मुख छ।
उनका अनुसार जलेको ठाउँमा प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यो दमकमा सम्भव छैन।
‘धरानले रेफर गरेको बिरामी, त्यो पनि घाउ बिग्रँदै गएपछि चिन्ताजनक अवस्थामा ल्याइएको थियो,’ डा. सुवेदीले भने, ‘हामीले यहाँ हुने साधारण उपचार सुरू गरेका छौं। बहिनीको थप उपचार बर्न स्पेसल अस्पतालमा मात्र हुन सक्छ।’
देवीबहादुरको परिवार कुलमायालाई बचाउन चाहन्छ। आवश्यक आर्थिक हैसियत छैन। कुलमायाका काका रत्नबहादुर छोरी बचाउन हारगुहार गरिरहेका छन्।
‘सकेको जे यहीँ गरिरहेका छौं, थप उपचार गर्न हामीसँग केही छैन,’ रत्नबहादुरले भने, ‘कस्तो आपत् आइलाग्यो। जग्गा-जमिन धितो राखौं भने पनि छैन।’
स्थानीय नेता राईको नेतृत्वमा ‘कुलमाया बचाउ अभियान समिति’ गठन भएको छ। समितिले उनको उपचार र पारिवारको जीवनयापन निम्ति सहयोग गरिदिन सार्वजनिक अपिल गरेको छ। ‘देश-विदेशबाट उपचारका लागि केही रकम जोहो भएको छ,’ राईले भने।
कुलमाया बचाउ अभियान नाममा सिद्धार्थ बैंकको दमक शाखामा खाता खोलिसकेको उनले बताए।
एउटी युवती जलेर डेढ महिनासम्म उपचार अभावमा तड्पिइरहनुपर्ने अवस्थामा गाउँपालिकाको केही सहयोग हुँदैन?
यो प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाबाट हामीले १०-१५ हजार सहयोग गर्यौं। हाम्रो कार्यविधि जे छ, त्यहीअनुसार सहयोग गरेका हौं।’
कुलमायाकी आमाको १२ वर्षअघि नै प्रसूति गराउने क्रममा रक्तचाप बढेर मृत्यु भएको थियो। बुबालाई घरको काममा सघाउने ठूली छोरी कुलमाया आफैं जीवन-मृत्युसँग लडिरहेकी छिन्। देवीबहादुर बिहान-बेलुकाको छाक कसरी टार्ने समस्यासँग जुधिरहेका छन्।
कमल गाउँपालिका पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको झापाको सुविधासम्पन्न गाउँपालिका हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ।
यो गाउँपालिका त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ चार अर्बको भ्यू टावर बनाउने योजना अघि बढेको छ। साधारण जनताले औषधि उपचारका लागि यस्तो संघर्ष गरिरहँदा भ्यू टावर सरकारी प्राथमिकतामा परेको छ।
छाउपडी मान्नेको सुविधा कटौती गरिने
एउटा अनलाईनमा “दिल निशानी मगरको असमायिक निधन” भनेर समाचार आएको रहेछ यद्द्पी म कुनैपनी प्रकारको साईबर क्राईमको उजुरी गर्ने पक्षमा छैन। किनभने हाम्रो देशमा साईबर क्राईम समबन्धी बलियो कानुन नै छैन :दिल निशानी मगर